Mgbanwe nke Ecommerce na afọ iri gara aga | ECommerce ozi ọma
Mgbanwe nke Ecommerce na afọ iri gara aga
Otu n'ime Ihe kachasị mma nke Internetntanetị bụ ohere ngwangwa. Weebụ agbanweela ụzọ anyị si arụ ọrụ, otu anyị si akpakọrịta, na mgbawa nke azụmahịa agbanweela ụzọ anyị si azụ ahịa.
1 Ahịa ntanetị
3 Digital na online ahịa
4 Ọdịnihu nke e-azụmahịa
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ahịa na ụdị ndị a ma ama nwere ịzụ ahịa dị n'ịntanetịDika uto nke ebe ahia di iche iche di ka Amazon agbanweela otu ndi mmadu si eri ihe site na itinye nkasi obi na ntukwasi obi.
Ikekwe otu n'ime mgbanwe kachasị mkpa nke Ecommerce na afọ ndị na-adịbeghị anya bụ ikike nke ịchọgharị, tụnyere ma zụta site na saịtị mkpanaka ma ọ bụ ngwa site na Smartphone ma ọ bụ mbadamba. Azụmahịa ekwentị na-anọchite ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ga-ahọrọ ugbu a ịnweta ọhụụ zuru oke nke njem onye na-azụ ahịa site na obere enyo.
Digital na online ahịa
Ngwa njikarịcha nke e-azụmahịa ọ nwekwara mmetụta dị ukwuu banyere otu ụlọ ọrụ si ejikọ ndị ahịa na ire ahịa ngwaahịa ha. Ọtụtụ mmadụ, ọkachasị ndị na-eto eto, na-edobe ekwentị ha nso, na-eme ka ọ dịrị ndị ahịa na ndị mgbasa ozi mfe karị.
Ọdịnihu nke e-azụmahịa
La Ezigbo eziokwu na-enye ohere nkwalite dijitalụ ịgafe ihe dị adị dị adị iji mee ka ọ nwekwuo nghọta na mmekọrịta. Njikọ nke eziokwu agbakwunyere na ọnụ ụzọ e-commerce na-agbanwe ngwa ngwa ụzọ ndị ahịa si azụ ahịa, na-enye ha ọtụtụ itinyekwu ego na ahụmịhe onwe ha.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ahịa azụta arịa ụlọ na ntanetị, ha na-eche naanị ihe akwa ọhụrụ ma ọ bụ desk ọhụụ ga-adị n'ụlọ ha. Ọtụtụ eleghị anya, na-adịghị ọbụna na-enwe ọganihu gabiga igodo nsoro ruru ka ejighị n'aka nke ịzụ ahịa n'ịntanetị. Agbanyeghị, site na itinye ngwa ngwa, onye ahịa nwere ike ịhọrọ arịa ụlọ ha chọrọ ịtụle, wee jiri anya nke uche hụ ihe ihe ndị ahụ ga-adị na ụlọ nke aka ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » Mgbanwe nke Ecommerce na afọ iri gara aga
Kedu ihe kpatara azụmahịa e-commerce ji ewu ewu na China?
Mee ka netwọkụ mmekọrịta gị bụrụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na ndụmọdụ ndị a dị mfe